Lotta Schelin: "Waxay aheyd gool fudud" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Lotta Schelin. Foto: Scanpix.
Lotta Schelin: "Waxay aheyd gool fudud"
''Waxay muujiyeen ciyaar qurux badan''
La daabacay torsdag 25 juli 2013 kl 09.55
Waxay u aheyd Iswiidhen guul daro qaraar ah ciyaartii semifinal-ka ee xulka hablaha qaranka Iswiidhen isaga hor yimaadeen xulka Jarmalka. Durbadiiba marka ay soo dhammaatay ciyaarta waxaa Radiosporten la hadashay xidigta Iswiidhen ee xagga weerar Lotta Schelin oo aad u niyad jabsaneed.
– Waxay ila tahay in aan u qalanay si ka wagaansan sidan, ayay xidigada xagga weerarka ka ciyaarta Iswiidhen.
Iswiidhen ayaa xalay lagaga adkaaday 1-0 ciyaartii Final-ka ee koobka kubada cagta dumarka Yurub ee sanadkan martigelisay Iswiidhen. Jarmalka ayaa noqday mid adag oo aan laga reyn kareen hase yeeshee natiijada ciyaarta ayaa noqon laheyn mid ka duwan sida ay xlay ku soo dhammaatay waayo daqiiqadii 62-aad ee ciyaarta, weeraryahanada Iswiidhen Lotta Schelin ayaa heshay fursad iyada iyo goolhayaha jarmalka keliya, waxayna si xarago garabka kor ugu qaaday kubada gelisayna shabaqa Jarmalka, waxayna dad badan moodeen in Jarmalka la bareejeeyay.
Balse, garsoorahii ciyaarta ayaa dhawaajiyay firinbiga iyada oo darbo xor ah loo dhigay xulka dalka Jarmalka maxay tahay sababta? Lotta Schelin ayaa si xoog ah ugu dhacday gool haya Jarmalka Annike Krahn loolan dhow oo ku dhex maray kubada.
– Waxay u muuqataa in Karhn iyo aniga aad isugu soo dhowaanay laakiin iyada ayaa iskeeda u kuftay. Waxay ila tahay in ay ahyed gool fudud, ayay tiri Lotta Schelin oo la hadashay Lotta Schelin.
Xidigta reer Iswiidhen ee xagga weerarka ka ciyaarta kubada cagta ayaa ceshan weyday ilinta ka dib markii ay xalay soo dhammaatay ciyaarta.
– Waa wax aad u culus in sidan aynu ku tagno, waxaan rumeysanahay in aan u qalanay si ka waagsan sidan.
Xulka Jarmalka ayaa goolka ay ku adkaadeen waxay dhaliyeen daqiiqadii 33-aad ee ciyaarta waxaana u saxiixday Dzsenifer Marozsán. Iswiidhen ayaa goolkaasi kaga jawaabtay kaambiyada dambe ee ciyaarta weeraro lala yaabay waxayna ciyaarta u muuqaneysay mid ku soo dhammaaneysa bareejo oo dhowr jeer ayaa waxaa u dhalan gaaray Iswiidhen gool balse kubada ayaa diiday in ay gasho shabaqa Jarmalka.
– Ma dareemeyno in awood na loo sheegtay, waxaan dareemeynaa in aan si awood ah u ciyaarnay laakiin kubada ay diiday in ay inoo dhalato, ayay tiri Lotta Schelin.
– Hadda waa uu niyad jab. Waaay cadahay in riyaddii aan ku aadi laheyn garoonka l Friends Arena ee Stockholm in ay meesha ka baxday, ayay Lotta Schelin ku soo gabagabeysay hadalkeeda.